बधाई ! ईन्द्रेणीका बाँसुरी बाधक पावलले बनाए विश्व रेकर्ड !
काठमाण्डौँ : लोकप्रिय कार्यक्रम ‘इन्द्रेणी’का बाँसुरी बाधक पावल राईले विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् । सोलुखुम्बुको देउसामा जन्मेका उनले विश्वकै अग्लो स्थानमा रे’कर्ड गरिएको
गीत र छायांकन गरिएको भिडियोको माध्यमबाट आफ्नो नाम गिनिज बुकमा लेखाएका हुन् । गोक्यो ताल क्षेत्र (४८१३ मिटर)को उचाईमा कलाकारहरुले लाईभ बाजा सहित ‘गोक्यो रि’ गीत लाईभ अडियो र भिडियो छायांकन गरेका हुन् ।
उक्त प्रोजेक्टमा पावलले लाइभ बाजा बजाएका छन् भने उनी निर्माता समेत हुन् । बाँसुरी बाधक पावल राईसंगै अन्य ४ नेपालीले पनि सोही प्राजे’क्टबाट रेकर्ड कायम गरेका छन् । सोलुखुम्बु बासा सन्च खालिङ, सोताङका लक्ष्मण कार्की, सिन्धुपाल्चोकका पुष्कर नेपाल र काभ्रेका राजन खरेलको नाममा रेकर्ड होल्ड भएको छ ।
यो प्रोजेक्टका अवधारणाकर्ता सन्च खालिङ हुन् । रेकर्ड होल्डरलाई केही हप्तामा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गिनिज बुक स्रोतले जनाएको छ । मिलन कि’राँतीको गीत, विक्रम राईको संगीतमा वविना किराँतीले स्वर दिएको गीत सोलुखुम्बुमा
अवस्थित गोक्यो ताल क्षेत्रमै रेकर्ड गरिएको हो भने भिडियो छांयांकन पनि सोही ठाउँमा गरिएको हो । गीतको रेकर्ड साउण्ड रेक’डिष्ट छिरिङ भोटेले गर्नुभएको हो । दुल’र्भ ज’न्तरे (सोलुखुम्बु–सोताङ)को निर्देशनमा तयार भएको गीत र भिडियो निर्माणमा हालसम्म करिब २० लाख खर्च भइसकेको निर्माण टिमले जनाएको छ ।
२०७७ चैत्र ११, बुधबार ०९:३१ गते 1 Minute 1632 Views